Papa Pear Saga 1.106.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.106.1 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Papa Pear Saga
Papa Pear Saga ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Candy Crush Saga & လယ်ယာသူရဲကောင်းများ Saga ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် Papa သစ်တော် Saga,!
ဒါဟာ Papa Fiesta ပဲ! ဒီထူးခြားတဲ့ပဟေဠိဂိမ်းအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်း bounce ။
ရည်ရွယ်ထား ယူ. fruity တံစို့, hazelnuts နှင့်အရူးငရုတ်သီးတစ် wacky ကမ္ဘာအဝှမ်း bounce နှင့် boing မှ Papa သစ်တော်တိုက်ဖျက်မည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စွန့်စားကို Fruity သစ်တော, Pearsylvania ၌၎င်းထက်ကျော်လွန်သင်စောင့်ဆိုင်း။ BOING!
တယောက်တည်းကဤမော်ကွန်း Saga အပေါ် Take သို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုရနိုင်သူကိုကြည့်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကစားဖို့!
Papa သစ်တော် Saga ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောအပိုရွေ့လျားသို့မဟုတ်ဘဝတွေကိုကဲ့သို့အချို့အတွက်ဂိမ်းပစ္စည်းများငွေပေးချေမှုတောင်းမည်။
Papa သစ်တော် Saga features:
သင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်အဘို့လမ်းညွှန်ရှိလိမ့်မည်ဟု• Pearfect ဂရပ်ဖစ်
• Boosters နှငျ့သူတို့အားစိန်ခေါ်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကိုကူညီအာဏာကို ups
•ဖြည့်အဆင့်ဆင့်အားဖြင့် unlock အထူးပစ္စည်းများ
• leaderboard သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ပြိုင်ဘက်များစောင့်ကြည့်ဖို့,
•အလွယ်တကူ devices များအကြားဂိမ်း sync နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သည့်အခါအပြည့်အဝဂိမ်း features တွေ unlock
Papa သစ်တော် Saga ၏ယခုပင်လျှင်ပရိတ်သတ်? ကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်သို့လိုက်လိုပဲ:
အနည်းဆုံးပြီးခဲ့သည့်သော်လည်းမ, ကလေးတို့ Papa သစ်တော် Saga ကစားခဲ့သူလူတိုင်းထွက်ဝင်တစ်ဦးကြီးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Papa Pear Saga အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Papa Pear Saga အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Papa Pear Saga အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Papa Pear Saga အား အခ်က္ျပပါ
bonds စတိုး 1.25k 1.76M
Papa Pear Saga ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Papa Pear Saga အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.106.1
App Name: Papa Pear Saga
Release date: 2019-07-30 02:18:19
Papa Pear Saga APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ